Kumanaan lagu dilay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo - BBC News Somali
Kumanaan lagu dilay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo
Image caption Qaramada Midoobe ayaa ku baaqaday in baaritaan madax bannaan lagu samaynayo rabshadahan
Madax Qaramada Midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka Zeid Ra'ad al-Xuseen ayaa BBC-da u sheegay in saddexdii bilood ee ugu danbeysay ugu yaraan 2000 o qof lagu dilay rabshado ku salaysan qowmiyado oo ka dhacay dalka Jamhuuriyada Dimuqraadiga ee Congo .
Baarayaasha gobolka bartamaha Kasai ayaa waxa ay arkeen xabaal-wadareedyo gaaraya 42, waxaana jira caddaymo muujinaya in dadkani la toogtay ama la gubay.
Qaramada Midoobay ayaa ku eedeysay tacaddiyadan ciidammada ammaanka iyo maleeshiyaad ay taageerto dowladda .
Madaxa xuquuqul insaanka Zeid Ra'ad ayaa sheegay in tacaddiyadan la geystey xilli ay socdeen dagaalo u dhexeeya maleshiyaad taageero ka helaya dowladda oo loo yaqaano Bana-Mura iyo falaago mucaarad ah oo loogu magac daray Kamuina Nsapu.
Dhinaca kale, mar sii horeysay ayay Kaniisadda madhabta kaatoligga ee dalka Jamhuuriyada Dimuqraadiga ee Congo sheegtay in sagaalkii bilood ee ugu danbeeyay ciidamada ammaanka iyo malayshiyaadka ka soo horjeeda in ay gobolka bartamaha Kasai ku dilleen in ka badan saddex kun oo qof.
Kaniisadda madhabta Kaatoliga ayaa warbixinteeda ku salaysay macluumaad ay ka heshay bulshooyiinka ku dhaqan gobolka bartamaha Kasai.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in tan iyo bishii Oktoobar ee sannadkii hore ugu yaraan 3,383 qof lagu dilay dagaal u dhexeeyay ciidammada ammaanka iyo maleeshiyaad.
Sidoo kale waxaa warbixnta lagu xusay in gabi ahaanba la burburiyay labaatan tuulo taas oo kalabar ay ciidammada dowladdu burburiyeen.
Guddiga xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in ay todobaadkan u codeeyaan in baaritaan madax bannaan lagu samaynayo rabshadahani iyo in kale.